Friday November 24, 2017 - 19:42:47 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar dhiig badan ku daatay oo lagu qaaday Masjid kuyaal waqooyiga gobolka Saynaa ee dalka Masar.
Sawirka Masjidka weerarku ka dhacay ee gobolka Saynaa
Wararka ka imaanaya Masar ayaa sheegaya in ugu yaraan 235 qof shacab ah ay ku dhinteen weerar qaraxyo barbar socdeen oo kooxo hubeysan ay ka geysteen tuulo ku dhow Magaalada Alcariish ee xarunta u ah gobolka Saynaa.
Saraakiil katirsan dowladda dabadhilifka Masar ayaa sheegay in ugu yaraan sedax qarax lala helay gudaha Masjid dad suufi ah ku cibaadeysanayeen waxaana qaraxyada xigay weerar toos ah oo ay fuliyeen rag hubeysan.
Wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganaysa dad goob joogayaal ah ayaa sheegtay in rag tiradooda lagu qiyaasay 40 dagaalyahan ay rasaas huwiyeen gaadiid ay dad masaafur ah la socdeen oo marayay waddo ku dhow Masjidka taas oo sare uqaadday khasaaraha dhimashada.
Shabakadda Rasad ee laga leeyahay dalka Masar waxay sheegtay in kooxaha weerarka geystay ay rasaas ladhaceen gaadiid ambalaas ah oo dhaawacyo ka daad gureynayay goobta arrintaas oo xaaladda sii adkeysay, wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka weerarka ku dhintay ay kamid yihiin ciidamo katirsan dowladda Masar sida ay faafisay wakaaladda AFP.
Masjidka weerarka lagu qaaday waxaa gacanta ku heysa dariiqada suufiyada gaar ahaan garabka lagu magacaabo Aljariiriyah oo ku badan gobollo katirsan wadanka Masar, sarakiisha caafimaadka waxay sheegayaan in dadka dhaawacmay oo ka badan 135 qof qaarkood xaaladoodu ay aad uliidato.
Hoggaamiyaha Masar Cabdi Fataax Alsiisi ayaa weerarkan ku eedeeyay wax uu ugu yeeray Argagaxiso oo uu ula jeedo xoogaga islaamiga ah ee dagaalka uga jira gobolka Saynaa kuwaas oo horay dariiqada suufiyada ugu eedeeyay in ay garab siiyaan nidaamka Masar.
Sawirro lagu faafiyay baraha Bulshada ayaa muujinaya dhiig dhax gubanaya gudaha Masjidka weerarku ka dhacay iyo meydad goobta daadsan.
Falkan dadka badan ku dhinteen ayaa ku cusub wadanka Masar, weerarada lagu qaado Masaajidda ay muslimiintu ku cibaadeystaan ayaa sanadadii lasoo dhaafay ka dhacayay wadamo ay kamid yihiin Nigeria,Afghanistan iyo Ciraaq.
illaa iyo hadda majirto cid sheegatay Mas'uuliyadda weerarkan, qaar kamid ah taageerayaasha xoogaga jihaadiga ah ayaa Nidaamka Masar ku eedeeyay in weerarkan uu mas'uul ka yahay si uu indhaha caalamka ugusoo jeediyo kooxaha ka dagaallama gobolka Saynaa.